Ukuthola eliphezulu izitsha - isenzakalo esibaluleke nganoma yisiphi uwayehlalise. Kukhethwa kwesokudla kungasiza ngcono futhi zenza ukuphila kube mnandi.
imikhiqizo yenkampani Delimano
Izibuyekezo abasebenzisi izinto eziningi ezitholakele zifakazela ukuthandwa okukhulu kwalesi Cookware brand. Iningi abathengi weneliseka ukuthenga kwabo. Imikhiqizo ekhiqizwa yinkampani Italian ethengisa imikhiqizo yayo emazweni angaphezu kuka amabili emhlabeni wonke. Futhi aligcini nje the impumelelo. Minyaka yonke izimakethe iqhubeka yanda.
Dedela zobumba Ceramic - ukuthi isiqondiso eyinhloko inkampani Delimano. Izibuyekezo Umthengi bathi ukusetshenziswa izimbiza, amapani nokunye. D. Lokhu kusenza ukupheka ukudla okwehla esiphundu futhi unempilo. Ngaphezu kwalokho, le nqubo kungenzeka ngaphandle umzamo nemali eningi.
Izinzuzo izinkampani Cookware Delimano
Izibuyekezo Isazi afakaze nokusimama umkhiqizo. Njengengxenye ye-nezinto ukuthi likhiqizwa ngaluphi, kukhona nhlobo izinto eziyingozi empilweni yomuntu. Izitsha Delimano, intengo engasekelwa labizwa ngokuthi ongaphakeme, ithengiswe kuphela ezitolo okudayisa ezithengisa-intanethi. Lokhu kuqinisekisa ukuvikelwa umthengi ngokumelene mbumbulu. izinga lomkhiqizo uphakeme kakhulu kangangokuthi ukuthengwa, naphezu imali eningi, a ejabulisayo nemnandi.
Kunzima ukuthola umkhiqizo ukuthi bazokwazi esikhundleni izitsha Delimano. Izibuyekezo ekhaya iningi lithi izinga epanini pan lenkampani Italian ngokhiye ukudala sokudla okwehla esiphundu. Kulokhu, inqubo ukupheka yena Kujabulisa ngempela.
Delimano tableware has a enamathela sobumba. Lona umbandela esiyinhloko kukhwalithi ephezulu. Phansi obukhulu esiyingqayizivele non stick enamathela avumele ukuba bayakhohlwa izinti ukudla kuya pan. ebusweni Ceramic zingamelana amalahle ngisho kuze kube degrees amane namashumi ayisihlanu. Nokho, akukho izinguquko ezihlelekile ziyenzeka kuwo.
I enamathela Ceramic ziwusizo?
Lapho ukupheka ebhodweni Delimano imikhiqizo ehlukene kuyinto ukuvaleka yabo wesabelo yangaphandle. Ngenxa yalokho yale nqubo, ukudla azigcina zonke ayo uqukethe amavithamini namaminerali. Izidlo kuphekwe ebhodweni wale nkampani isiNtaliyane, eziwusizo kakhulu.
Libhekisela kungenzeka zobumba nekhono layo ukulungiselela ukudla, ngisho okushisa aphansi. Cookware enamathela Delimano ine omuhle kakhulu conductivity ezishisayo, futhi ihambisa ukushisa ngokulinganayo phezu bonke ubuso. Ngakho, kungenzeka ukuba ugcine kwi kukagesi noma igesi.
Ukusetshenziswa enamathela Ceramic itholakala ukusebenza kwayo. It ayiqukethe eziyingozi womuntu. I element eyinhloko ngobumba, ubumba yemvelo okungamazwe asetshenziswe ukukhiqizwa izinto.
Eliphezulu izinto Delimano
Izibuyekezo amakhasimende amaningi adunyiswe ochungechungeni entsha "Prima Mega". Izinzuzo main izitsha zimi kanje:
- nokuba khona ukugqwala ukumelana enamathela;
- ukumelana imihuzuko, ukuze lokushisa elikhulu nokungqubuzana;
- degree Ephakeme ukushelela;
- ikhono ukunciphisa ukusetshenziswa amafutha nowoyela;
- kulondolozwe izakhiwo ewusizo futhi ukunambitheka kokudla.
Setha izitsha kulolu chungechunge, esakhiwa izinto eziyisishiyagalolunye, itholakala phakathi eziyinkulungwane nantathu.
Kanjani ukwakha nephuphu ngezandla zakhe?
Ukutadisha ifa kwezobuciko: Pushkin, "Ndodakazi uKaputeni sika"